Amazon dia mamoaka bokotra Dash virtoaly ho an'ny fampiharana | Vaovao IPhone
Amazon dia mamoaka bokotra Dash virtoaly ho an'ny fampiharana azy
Karim Hmeidan | | Fitaovana IPhone, Fampiharana iPhone
Maro aminareo no hisoratra anarana amin'ny Amazon premium, Amazon iray izay nanova ny fitsipiky ny lalao fiantsenana. Paikady momba ny vidiny lehibe, ary ny fahafahantsika manana ny baiko ny ampitson'iny ao an-tranontsika maimaim-poana, no mahatonga an'i Amazon hanana mpanaraka bebe kokoa.
Ary indrindra ho an'ireo mpanjifa premium ireo, nandefa volana vitsivitsy lasa izay i Amazon Dash Buttons, bokotra sasany hanamboarana automatique ny fividianana vokatra izay ampiasaintsika isan'andro. Eny, niverina tany am-piandohana i Amazon ary nandefa ny bokotra fivarotana mivantana malaza, ny Dash Buttons, saika, zavatra izay tsy isalasalana fa afaka manararaotra tsara kokoa ...
Mazava ho azy, mitandrina tsara, ary tsy afaka mijanona amin'ny fieritreretana isika fa ity no fara-tampon'ny mpanjifa, zavatra iray izay misy atahorana betsaka. Araka ny fantatrao, ny Dash Buttons dia bokotra izay natombok'i Amazon hametrahana antsika eo akaikin'ny fitaovantsika, na manerana ny tranonay, ka Tamin'ny fanindriana fotsiny an'io bokotra io dia nanomboka niasa ireo tovolahy tao Amazon mba hanomezana anay izay efa lany. (Azonao atao ny manafoana ny fandefasana mandritra ny 30 minitra). Raha fintinina, tsy ao anaty taratasy an-dakozia izahay, tsindrio ny Dash Button an'ny marika amin'ny taratasin-tranonay ary raisinay any an-trano izany.
Ny bokotra sasany izay, araka ny fantatrao, dia nifandray tamin'i Amazon tamin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi anay. Ireo vaovao Virtual Dash Buttons dia hiasa amin'ny fomba mitovy amin'izany fa izy ireo kosa hamonjy antsika tsy hofenoina ny bokotra mpanjifa. Homenay azy ireo malalaka na amin'ny fampiharana Amazon ho an'ny iOS na amin'ny tranokala Amazon, raha vantany vao niditra tamin'ny mombamomba anay Amazon Premium. Amin'ny farany izy ireo dia hitsin-dàlana amin'ny fividiananay mahazatra indrindra, ary amin'ity tranga ity dia hitako fa mety kokoa izany. Amin'izao fotoana izao Tsy any Espana io fa tena azo inoana fa halefa ao anatin'ny andro vitsivitsy raha raisina an-tsaina fa ny Dash Buttons ara-batana dia teto amintsika nandritra ny iray volana mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Amazon dia mamoaka bokotra Dash virtoaly ho an'ny fampiharana azy
Hugo Barra te hiverina any Silicon Valley ary handao an'i Xiaomi
Inona no tokony hataonao alohan'ny fivarotana ny iPhone?